Ukudweba kukaJanik Faiziev "Ngo-Agasti. Eyesishiyagalombili ", abadlali bayo, ngendlela, kuyizinkanyezi ze-cinema yaseRussia, naphezu kwayo yonke imizamo yabasebenzi befilimu, behlulekile ebhokisini lebhokisi. Noma kunjalo, umbono wefilimu uqobo kakhulu futhi ufanelwe ukunakwa kombukeli. Ngakho-ke, yiliphi ifilimu mayelana nokuthi kungani kufanelekile ukubona?
«Agasti. Eyesishiyagalolunye ": abadlali, isithombe. USvetlana Ivanova
Phakathi nendawo yefilimu ngumfana omncane u-Artem, oza eholidini ehlobo ngogogo wakhe nogogo eNingizimu Ossetia futhi kwenzeka ukuthi kwenzeka phakathi kwezingxabano zempi ezenzeka kulezi zizwe ngo-Agasti 2008.
Le filimu ayinayo noma yiyiphi i-politicization, ukuhlolwa kwe-belligerents akunikezwa. U-Artem we-protagonist uncane kakhulu ukuze angaqondi lutho - uhlala ezweni lokucabanga kwakhe. Ngakho-ke, konke okukwenzekayo kubonakala emgodini womcabango womfana: ubheka amasosha akhe aseRussia namaRussia njengeRobhothi Elihle, futhi abaphikisi babo njengezinceku zomlingisi wezintambo zikaMnuakowlast.
Emdwebeni "Agasti. Abadlali abangu-8 "uSvetlana Ivanova no-Egor Beroev badlala abazali baka-Artem abahlukanisile. Ngokushesha nje lapho i-heroine kaSvetlana Ivanova ezwa ukuthi indodana yakhe isendaweni yokulwa, iya ngokushesha eNingizimu Ossetia, futhi ngamaqiniso onke nezinkohliso zizama ukuthatha umntwana wakhe. Ukwenza lokhu, kufanele ahambe uchungechunge lwezivivinyo futhi abone ukufa okuningi. Ngakho, "Agasti., The Eighth" ngokuyinhloko indaba ngezenzo zobuqhawe zikamama, hhayi ngempi yezempi.
«Agasti. Eyesishiyagalolunye ": abadlali kanye nezindima, isithombe. Maxim Matveyev
U-Maxim Matveyev kule filimu uJanika Faiziev wadlala umphathi weqembu le-recessissance Lech. Ngesikhathi sokuqala hero yakhe ihlangana no-Xenia (uSvetlana Ivanova), lapho kuhlaselwa i-rocket imoto lapho umama ka-Artem nabanye abantu ababehamba khona. Inqola yokulondoloza ukuthula kaLehi yasiza ukuthola u-Xenia owesabisayo kuTskhinval.
Kodwa-ke, imizamo ka-Xenia yokuqhubeka ngendlela yayo ibonakala ingaphumeleli. Ngemuva kokunye ukuthungathwa kwezokuthutha kwakhe, uphinde ahlangane noLech futhi eseduze nombutho wakhe. Lapha owesifazane osemusha uba ngufakazi weqiniso lokuthi i-hero kaMaxim Matveev uyazi kahle ibhizinisi lakhe futhi akayona nje ochwepheshe abahle, kodwa futhi nomuntu ohloniphekile. Lapho konke kuphelela ngokuphepha, iqhawe likaMatyeyeva no-Ivanova lihlangana esikhumulweni sezindiza, futhi uyethula indodana yakhe.
Esithombeni "Agasti. Abayisishiyagalombili "abadlali bamenywa kakhulu. U-Maxim Matveyev ungowesigaba sabantu abanjalo: izilaleli ziyamazi kahle kumafilimu ethi "Ama-Vices", "amaDandi", "Ukukhokhiswa Konyaka Omusha" nabanye abaningi.
U-Egor Beroev njengo-Zaur
Esikhathini se-movie yempi "Agasti. Abadlali abesishiyagalombili "uBeroev no-Ivanova badlala abahlukumezekile, abafana babo - u-Artem. Uhlamvu lukaBeroev-Zaur-ngubani osikisela ukuthi i-Xenia ithumele i-Artem encane kubazali bayo eSouth Ossetia.
Lapho u-Xenia othukile ememeza ngemuva kwesikhashana futhi ebuza ngesimo emngceleni, uZaur akayithinti ngokungathí sina, ngoba ungumenzi wokuthula futhi ukholelwa ukuthi konke okuseSouth Ossetia kuqhubeka ngokujwayelekile. Kodwa ngokuzumayo, izinhlupho ziqala, futhi uZaur kumele aphuthume ngokushesha abazali bakhe nengane. Ingabe ubaba akanawo isikhathi: uyafa kanye nezihlobo zakhe, futhi umfana omncane uhlala ephila.
I-Yegor Beroev inemvelaphi yesi-Ossetian, ngakho ngokushesha wavuma ukudlala indima ayiphakamisile. Ngaphambi kwalokho, umlingisi usuvele waba nendima enkulu kwelinye lamaphrojekthi kaFayziev - "I-Gambit yaseTurkey". Futhi, i-Berieva ibonakala kumafilimu ethi "Admiral", "Desantura" ne "Chemist".
Abadlali befilimu "Agasti. Okwesishiyagalombili "futhi wathola eqenjini labo u-Alexander Oleshko, owawuthola isoka lika-Xenia - Egor.
I-Egor ayitholi kahle nendodana ka-Xenia kusukela emshadweni wayo wokuqala - Artem. Ngakho-ke, lapho beya eSochi ehlobo ka-2008, abafuni ukuthatha umfana nabo. Ezama ukuxazulula le nkinga, u-Xenia uthumela u-Artem ngeholide eSouth Ossetia. Uma isimo sivela ekulawuleni, uphendukela ku-Egor ukuthola usizo, kodwa okushiwo, ngokusho okubuhlungu, kunika owesifazane ukuthi aqonde ukuthi akahlose ukubhekana nezinkinga zakhe. Empeleni, lokhu kungukuphela kobudlelwane babo.
U-Alexander Oleshko emsebenzini wakhe uzinikezele iqhaza eliqinile lomculi. Okuthandwa kakhulu ngumdlali we-actor kwaba ukuhlanganyela kulo mboniso "Ukuhluka Okukhulu", lapho kuhlangana noNona Grishaeva Olesko kuboniswe ngama-pop stars. Amafilimu abude kakhulu obude obugcwele ngokuhlanganyela kuka-Oleshko angacatshangwa ngokuthi "i-Gambit yaseTurkey", "isiqhingi esihleliwe" nomdlalo wokudlala "Umuntu onesiqiniseko".
Ifilimu "Agasti. Eyesishiyagalolunye ", abadlali kanye nezindima eziseduze futhi eziqondakalayo kumbukeli ovamile, waba omunye umsebenzi womdlali owaziwayo u- Alexei Guskova. Ku-fighter omnandi, u-Janik Faiziev, uGuskov uyingxenye yombutho wezikhali zikaKazbek. Esikrinini, uhlamvu lwakhe lukhona okwesikhashana futhi lusiza ngendlela ethile yeKsenia yokuthola indodana yakhe. U-Alexei Guskov ngaleso sikhathi usevele ehlangene nomqondisi uFaiziev - wadlala uLieutenant Colonel Kazanzaki efilimu yakhe ethi "Turkish Gambit".
Imisebenzi engcono kakhulu kaGuskov ebhayisikobho ihlotshaniswa nabalingiswa ababi. Kulo melodrama "Udoti" odlala umbulali oqashwe, "Emngceleni. I-taiga inoveli "- i-Nikita Goloshchekin enomhawu futhi eyingozi. Ngokusobala, uGuskov ubheka ngokucophelela indima ye-scoundrel ukuthi izindima ezinjalo zilandelwa umlingisi: "uSaboteur" u-Alexei Gennadyevich uvele endimeni yecala lobugebengu, futhi ku-comedy "U-Love-Carrot-3" waphinda wadlala isenzo sobugebengu, eshaqekayo esigqumeni somculo esiyigugu.
Abanye abenza imisebenzi
Emfanekisweni kaFayziev wabonakala iqhawe le-Olympic futhi u-Ossetian wangempela - Hasan Baroyev. Kule filimu, wadlala umngane kaZaur - Ilya.
Kubukeka kulesi sikhwama nakho kuyintandokazi kazwelonke uGosha Kutsenko, edlala indima ye-cameo.
UVladimir Vdovichenkov ("Brigade") uvele phambi kwezilaleli ngesithombe sikaMengameli weRussian Federation. Kwabeluleki bakaMengameli kwakuyizihlabisi zikaSergei Gazarov ("Limita"), u-Anatoly Bely ("Isigaba 78") no-Alexander Dubin. Indima yoNgqongqoshe Wezokuvikela waseRussia yenziwa nguVladimir Zaitsev ("i-Admiral").
Phakathi kwabalindi bezokuthula baseRashiya nabase-Ossetian kwakukhona abadlali be-Alexander Petrov ("Fartsa"), iKirill Pletnev ("iSaboteur"), uKonstantin Samoukov, u-Alexander Karamnov, uRoodon Galyuchenko noValentin Varetsky ("isigwebo").
Biography of Marina Zudina - Umdlali weSoviet neRussia
Amahlaya Ahlekisayo: Uhlu lwamahle kakhulu
Umdlalo wezempi "I-Red Line": abadlali nezindima
Ifilimu kaVera Storozhevoy "Ukuhamba ngezilwane ezifuywayo"
Amafilimu ngoDeveli. Uhlu lwezithombe mayelana ne-exorcism
IGreat Wall yaseChina: Umlando kanye Legends
Hypomenstrual Syndrome: Izimpawu, Ubangela, Ukwelashwa
Umshini wokuwasha "Indesit WIUN 81": Ukubukezwa, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Festival Riviera kuyona 4 * (Egypt, Hurghada): incazelo ehhotela, abahambi Izibuyekezo
Airport Verona, Italy: wesifunda, indawo, incazelo kanye nokubuyekeza
Bleak - inhlanzi-nevelichka. Incazelo zezinhlanzi nezindlela zayo ukudoba